Filtrer les éléments par date : lundi, 28 octobre 2019
lundi, 28 octobre 2019 22:49
Fifidianana Kaominaly: Kandida Ben’ny tanàna miisa efatra, kandida lohalisitra mpanolotsaina iray nindaosin’ny fahafatesana
Efatra tamin’ireo kandida Ben’ny tanàna miisa 6 275 neken'ny CENI amin’ireo Kaominina miisa 1 695 manerana an’i Madagasikara no namoy ny ainy, tsy mbola nanomboka akory ny fampielezan-kevitra. Avy ao amin’ny Distrikan’i: Toamasina II, Lalangina, Mampikony ary Ampanihy izy ireo.
Misy kandida lohalisitra mpanolontsaina iray, avy ao amin’ny Distrikan’i Mananjary ihany koa namoy ny ainy. Miisa 4 902 ireo lisitra mpanolontsaina hifaninana amin’ny fifidianana hotaterahina amin’ny 27 novambra 2019.
lundi, 28 octobre 2019 22:40
OTIV Boeny: Lasan’ny Paositra Malagasy ary niova sata ho « Société Anonyme »
Tsy ho mpampindram-bola madinika, fa hiova sata ho orinasa tsy anavahana anarana « Société Anonyme » ny OTIV Boeny aorian’izao nandraisan’ny Paositra Malagasy azy izao.
lundi, 28 octobre 2019 22:37
Toliara: Misedra olana amin’ny herinaratra
Tapatapaka ny famatsiana herinaratra omen’ny Jirama eto an-drenivohitry ny Faritra Atsimo Andrefana sy ny manodidina amin’izao fotoana izao. Olana roa goavana no antony, araka ny fanazavan’ny talen’ny Jirama Toliara, eo ny fihenan’ny tanjaky ny milin’ny orinasa Enelec, izay mamokatra herinaratra ho an’ny Jirama tato anatin’ny dimy andro izao, eo koa ny rivotra mitsoka mafy izay manakorontana ny fitsinjarana herinaratra.
lundi, 28 octobre 2019 21:53
« Petite Plage » - Mahajanga: Nomena hatramin’ny 30 oktobra ireo mpivarotra hiala
Fianakaviana maro, manao antom-pivelomana amin’ny varotra eny amin’ny « Petite Plage » no nandefasan’ny Kaominina ambonivohitr’i Mahajanga filazana voatery hiala noho ny fandaminana. Nomena hatramin’ny 30 oktobra 2019 izy ireo tsy hitoetra 25 metatra manoloana ny ranomasina.
Fanilihana no andraisan’ireo fianakaviana nivelona teo amin’ny « Petite Plage » izao fanapahan-kevitry ny fiadidiana ny tanànan’i Mahajanga izao, satria fantatra fa tsy hisy toerana ho azon’izy ireo hivarotana aoriarian’ny 25 metatra satria efa toeram-ponenana misy trano miorina.
Ho maro noho izany, hoy izy ireo, no tsy an’asa noho ity fepetra ity, ary tsy trano maharitra ilay nahorina, no tsy nanembatsembana ireo mpilomano. Izahay aza, hoy hatrany izy ireo no manome fahafam-po amin'ny sakafo sy entana ilain'ireo tonga mitsidika ety an-toerana.
lundi, 28 octobre 2019 21:36
Ambohigogo – Farafangana: Omby 22 lasan’ny dahalo, sivily iray maty voatifitra
Nitrangana fanafihan-dahalo mitam-basy tao amin’ny tanànan’i Manantorondra Fokontany Iabovolo, Kaominina Ambohigogo, Distrikan’i Farafangana ny alin’ny sabotsy 26 oktobra 2019. Lasan’ireo dahalo tamin’izany ny omby miisa 22.
Nisy ny fifandonana tamin’ny Fokonolona, namoy ny ainy tamin’izany ny sivily iray.
Mandeha ny fikarohana ireo olon-dratsy, ary mifarimbona manatanteaka izany ny Zandary avy amin’ny kaompania Farafangana, sy ny avy amin’ireo « Poste Fixe » ao Etrotroka, Lotranambo ary Mahamasy.
lundi, 28 octobre 2019 19:11
lundi, 28 octobre 2019 19:03
Itaosy: Ritra ny lavadrano, ny « forage »-n’ny Jirama tsy mbola mamokatra
Valaka ny mponin'i Itaosy amin'ny tsy fisian'ny rano, vao maika talanjona nahita ny « forage » ataon’ny Jirama hisitonana rano. Efa iray volana sy tapany no tsy misy rano mitete amin’ny paompy amin’ny kartie sasany ety Itaosy, ny lava-drano ritra tsy misy azo tovozina noho haintany.
Mamatsy rano amin’ny « citerne » ny Jirama miaraka amin’ny ministeran’ny angovo sy rano ary ny akoran’afo, saingy filaharam-be amin’ny daba mavo vao mahazo ; sahirana ireo mitaiza kely.
lundi, 28 octobre 2019 16:00
Maevatanana: Ijaliana ny rano
Mijaly rano ny vahoaka eto Maevatanana. Ho an’ny Fokontany sasany dia adiny iray no mba misy rano, fa ny ankamaroany efa ho efatra andro tsy mandeha ny rano.
Miverimberina isan-taona io olana io indrindra rehefa maintany toy izao, nefa tsy ahitam-bahaolana hatramin’izao ka mampitarina ny mponina.
Ny hafanana koa eto dia miakatra tokoa ny marim-pana.
lundi, 28 octobre 2019 14:35
Toetrandro: Mbola ho ambonin’ny 30°C ny hafanana ho an’Analamanga sy Vakinankaratra
Nahitana fiakarany 06°C ny volana Oktobra ny maripàna ambony sy ambany indrindra ho an’Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga, Antsirabe, Ranohira, Toliary izay nanamontsana ny maripàna voarefy hatramin’izay tao anatin’ny telo andro lasa.
Nanomboka tamin’ny 25 oktobra 2019 io fiakarana misongadina be ny maripàna ambony sy ambany indrindra io, araka ny fanazavan’ny avy amin’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro.
Mety mbola hitohy ao Menabe, ny any Atsimo ary ny ao Analalava ny hafanana ambony na mitovy ny 40°C mandra-pahatongan'ny alakamisy 31 oktobra 2019. Mety mijanona ho avo, ambonin'ny 30°C, ihany koa ny ao Analamanga sy Vakinankaratra hatramin’ny alarobia 30 oktobra 2019 ho avy izao.
lundi, 28 octobre 2019 13:38
Fifidianana kaominaly: Tonga ny andiany voalohany amin'ireo taratasy sy fitaovana hampiasaina
Nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny marainan’ny alahady 27 oktobra 2019, tamin’ny 03ora30 ny fiaramanidina nitondra ny andiany voalohany amin'ireo taratasy sy fitaovana hampiasaina amin'ny fifidianana Ben'ny tanàna sy Mpanolotsaina ny 27 novambra ho avy izao, toy ny valopy lehibe sy ny fitanana an-tsoratra ny latsabato, rehefa avy natonta tao Afrika Atsimo.
Ny tetikasa SACEM (Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar) niaraka tamin’ny Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana misahana ny fampandrosoana (PNUD), Vondrona Eorôpeana, Norvezy, USAID, Alemaina, Afrika Atsimo, Lafrantsa, Angletera, Korea Atsimo, Soisa ary Aostralia no namatsy vola ny fanontana printy, ny famonosana, ny fitaterana ireo fitaovana ireo tatsy Afrika Atsimo.